Taariikhda My Butros » The 5 Guddomiyaha Ururka Dating Big in dumarka Samee
Ma waxaad waqti xun ula shukaansi?
Ma waxaad u muuqdaan in ay tagaan dhibcaha ee taariikhaha iyo la hadal badan oo rag online laakiin marna ma u muuqdaan in ay la xidhiidhay ama la kulmi aad nin?
Haddii ay sidaas tahay waxay u badan tahay inaad samaynayso mid ama ka badan oo ah '5 qaladaad Dating Big'. Halkan waxa ku jira 5 Guddomiyaha Ururka Dating Big in haweenka, iyo waxa la sameeyo halkii.
1. Dating Tagaysaan Agenda An
Sidaas badan oo ka mid ah haweenka macaamiisha aan hab shukaansi la ajandaha oo runtii ah mid shaqaynaya iyaga iyo guulo la shukaansi ka dhanka ah. Waxana ay raadinayeen in ay nin, iyo haddii aanay isaga isla markaaba in mid ka mid ah nimanka la xiriiri ninka badalaa isla markiiba laga eryi iyo qoraal off aan fursad u ah taariikhda kale si ay u sahamiyaan xidhiidhka ka arki (ama aan haysan wax lamida) dheeraad ah. Oo haddii ay sameeyaan heli marxaladda taariikhda, Haweeney xambaartaa ajendaha si ay taariikhda iyo sidoo yar natiijada qanco.
Waxay u ekaan kartaa horjeedda in la yidhaahdo aadan haysan ajandaha marka shukaansi, hubaal ka dib dhan sabab oo dhan Waxaan taariikhda yahay in ay 'aad nin' xaq u kulmaan? Well haa iyo maya. Ugu danbeyntii iyo muddada fog ay tani tahay rabitaanka, Si kastaba ha ahaatee aad si xoog leh u yareyso fursadda aad dhigin in ay marxalad in haddii aad hab shukaansi la ajandaha. Marka marxaladdan ee ciyaarta waxaa ka wanaagsan yahay si aad u eegto shukaansi waxa ay tahay - fursad ay kula kulmaan oo noqon agagaarka xubnaha galmada ka soo horjeeda ee kafeega, Socon, oo sheekeysanaya, oo wixii la mid ah. Come on dadka - Waxa kaliya TAARIIKHDA A - ma wareysi aroos, si aynu waxoogaa yar nasato iyo daaweeyo maadaama sida. Waa sida aragtida ah kuwo xaqiiq ahayn in ay filayaan in aad ku ogaan kartaa in qof lammaane nolosha ka mid Kulanka oo ay goob macmal.
Haddii aad og tahay hab si shukaansi loogu tala galay dumarka waxaad ogaan doontaa waxaan ku talinaynaa shukaansi sida therapy ee beddeshey nidaamyada xiriirka xun. Si kastaba ha ahaatee badan shukaansi tan waxaa loogu tala galay inuu noqdo mid xiiso leh iyo iftiin kaakala. Haddii aad tagto qorshe ku saabsan ogaado haddii tani ay tahay nin geliya ton cadaadis ku saabsan xaaladda oo dhan, iyo in ka dhigan tahay in adiga ama taariikhda awoodi doontaa in aad isku dejiso oo wuxuu ku raaxaysan aragnimada. Ma awoodi doonaan in ay aad is fiican Waxaad iyo maayo inuu. Sidaas hoos u ajandaha oo mid cusub - inay leeyihiin cusub, waayo-aragnimo xiiso leh iyo iftiin kaakala tagi iyadoo dadka cusub.
2. Tali nin ka soo dhakhso u
Sida gafkii ugu horeeyey ee ugu weyn, qalad 2 waa hab kale oo dumarka iska toogtaan cagta marka shukaansi. Haweenka galbeedka badan oo bulshada maanta waxa xukuma ee 'chemistry' ay dareemaan marka ay timaado samaynta doorashooyin ay la ragga, oo waxaan arki doonaa mar kale galaan dhammaan noocyada kala duwan ee waqti dhib iyo waqti. Chemistry u badan yahay tilmaame saboolka ah ee haddii nin noqon lahaa saaxiib wanaagsan in aad. Dhab ahaantii chemistry culus oo inta badan waa calaamad digniin ah ee haweenka oo aan sameeyey xiriirka doorasho weyn ee la soo dhaafay. Inta badan dadka wanaagsan heli gebi ahaanba indho tiri karo sababta oo ah waxay neerfayaasha iyo habacsanaanta taariikhda oo hore waa isla markaana aanay ku xirato feer ee waaxda chemistry ah. Dumarka jiidashada koraan karaan waqti kasta nin wanaagsan leh. Sidaas oo kalaa dadku in sirgaxan aamusnaan ama fursad kale siiyo, dhab ahaantii siin taariikhaha gaaban dhowr iyo arko haddii uu ka soo baxay oo qolof uusan iman ma waxaad u soo jeesan oo nin soo jiidasho leh, laga yaabee in xitaa 'aad nin'. Ha ka werwerin haddii aad ka fekeri karto in hadda (khaladkaan 1).
3. Haw Taariikhda la Liiska A
Qalad 3 waxay la mid tahay ku qaldaan 1 oo kaliya sida dhaawacaaya, haddii aan ka xun. Waan ogahay in haween badan leeyihiin 'liiska' ka Aamin ah tayada in ay doonayaan (ama aad u malaynaysid inay doonayaan) in nin. Ma jiraan wax qalad ah la qaadan cad oo ku saabsan waxa aad rabtid in aad Mudanayaal lammaane fiican yahay, Si kastaba ha ahaatee ha u hesho ee xaqiiqada la geliyey liiska sababta oo ah qaar iyaga ka mid ah waa micno ah laheyn oo aan aad u adeegaya oo dhan!
Liiska inta badan waa mid aad u dheer oo inta badan waxa ay leedahay waxyaabo ku jiraan in si dhab ah caawa naftooda! Tusaale ahaan ayay leeyihiin laga yaabaa in 'is deji oo dib u dhigay' xaq u socda si 'dareen xoog leh oo firfircoon'. Hadda Ma dhahayo in aadan yeelan karaan dhamaan tayooyinka kuwa hal qof, waa kaliya in sida caadiga ah nin u egtahay dhinaca mid ka mid ah oo kale oo ku. Sidaas taas oo ay tahay? Sidoo kale liiska noo mararka qaarkood waxay leeyihiin wax on kuwaas oo si yar awgood, sida 'tattoos' ama 'muruqyada'. Come on Mudanayaal! Ma jiraan wax qalad ah ee haysta jirka door bidayso waa lakiin waxaa run ahaantii aad u dooraneysaa saaxiibkii aad la noolaan on haddii waxa uu leeyahay khad on jidhkiisa? Ma u malaynaysaa in this idinka soo bixin doonaa xiriirka wanaagsan ee nolosha? Maxay ku saabsan sifooyinka ahaantii arrinta, sida daacadnimo, daacad, naxariis, xoog (maskaxda) iyo wixii la mid ah?
Haweenay kasta waxay leedahay in ay go'aan ka gaarto waxa muhiim ah iyada. Si kastaba ha ahaatee waqti iyo waqti mar kale waxaan ku dhex arkay liiska heli markii qof dumar ah oo ugu dambeyntii kulmay lamaanahaaga nolosheeda Ibaadiyeyntaada, oo uu sida caadiga ah waa ka duwan ninkii ayay u dhacday, iyada oo liiska! Oo iyana waxay ku faraxsan yahay. Sidaa daraadeed taladayda - daadinaa liiska! Or, haddii ay tahay in aad leedahay, jari ugu badnaan xaqa ah 5 ugu tayada muhiim ah. Isticmaal tuse guud MA liis.
4. Isku day inaad aad u adag
Sidaas aad ugu dambeyntii la kulmay qof aad jeceshahay, aad ka soo baxdo on taariikh isaga la iyo aad dareento isku buuq. Sidaas maxaad sameyneysaa? Waxaad la hadli. Haddii uu jiro farqi u wada hadalka waxa aad u buuxiso. Waxaad soo jeedin meel ay aadaan soo socda, aad isaga la yaabtid la warkii adventures aad lahayd, isaga oo tusaya in aad dalkoodii ugu la dhalaalayay oo aad isaga u leeyihiin in laga tolay badan aad kaftan. Iyo dabcan waxaad u bixisaan si aad u bixiso nus ka mid ah taariikhda, ama laga yaabee in aad xitaa ka heli biilka oo dhan - waxaad tahay qof dumar ah oo casri ah ka dib dhan. Oo ka socda GREAT! Waxa uu qosol idin la, oo uu jiro xiriir, aad dareemi karto. Laakiin, ka dibna uu marna ku baaqeysaa. Qabow tagaa oo wuxuu baaba'aa laba taariikhaha ka dib. Wixii ka qaldan Sidaas?
Well Dadka badankiisu waxay door bidaan in ay qaataan ku saabsan doorka rag ah in shukaansi, iyo haddii aad samaynayso oo dhan ama mid ka mid ah aad kor ku xusan waxaa si dhab ah isaga riixaya ka mid ah xilkaan, taasoo la micno ah aad isaga ka hortagga uga dhowrtid caadifad maal-aad ee. Ragga xiisaha iyo dareenka ay ka go'antahay is qalad marka ay tahay inay geliso dadaalka qaar ka mid ah. Waxaad u malayn kartaa inaad isagoo soo jiidasho iyo racfaan si kastaba ha ahaatee ilaa hadda ma waxaad ka heli doontaa muddo dheer ka qaba dadka badankiisu. Waxa uu ku raaxaysan karaan waqtiga ay kula, waxaa laga yaabaa in uu ku qosli idin la, waxaa xitaa laga yaabaa in taariikhda labaad, si kastaba ha ahaatee uu u badan tahay in aakhirka waa balanqaaday inuu qof kale - qof dumar kale 'adag' kaas oo uu ku khasbanaatay in ay ku riday dadaal dheeraad ah.
Waxa uu u baahan yahay inuu noqdo mid ugu horeeysa wadahadalka, aad madadaalinta iyo jeediyay madasha. Haddii aad rabto in ay kiciyaan oo dareenkiisa qoto dheer ha u horseedi iyo xoog ku filan in uu raaco. Is dejiya oo dhaqmaan joogo oo ku raaxaysanaya halkii aragnimada.
5. Noqo An Ice xaasnimada
In la gabadhii baraf ah waa waddada tooska ah si ay isku dayayaan aad u adag. Dumarka qaarkood ogaato tirada qalad 4 iyo si ay u qaataan si kale aad u daran oo noqday mid aad u fog oo ka maqan. Inkasta oo laga yaabo in ay la socoto 'adag si ay u helaan' iyo 'qiimaha sare', haddii qaaday meel aad u fog habkani iman karo off in aad tahay xiiseyneynin, ka maqan, jikaar iyo xitaa snobby. Waxay dareemi karaan qabow yara in rag badan oo a, oo dadka badankiisu ku siin doonaa ilaa quruxsan si deg deg ah gabadh ula macaamiloodo baraf ah, marka laga reebo kuwa xiiseyneyso kaliya ee u babac of ceyrsashada, oo aadan rabin noocan ah nin sida uu u badan tahay in aad dhacdo mar tartanka waa weyn iyo dhaqaaqo in naag kale.
Waxaa loo baahan yahay in miisaanka u dhexeeya la dib dhigay / daynin isaga keeni oo weli xiiso iyo furan. Haddii aad ka heli karaa dheellitirka xaq waxaad u baahan doontaa waqti aad u weyn shukaansi. Waxa ugu weyn in la xasuusto waxaa kaliya naftaada noqon. Hel runtii xoog Naftahaa Naftaada oo aad hesho raaxo leh in aad maqaarkaaga u gaar ah. Dating dhab kaa caawin kara arrintaas!
Sidaas tago waxaa ka bax oo ma dhammaan ayuu ka sarreeyaa qaadan shukaansi aad shakhsi ahaan. Marna ma ogaan waxa ka socda qofka kale. Waxay ula dhaqan sida xiiso 'dhaqanka' oo ay kuu shaqaynayso.